Mareykanka oo Duqeyn ku beegsaday Al Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo Duqeyn ku beegsaday Al Shabaab
Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya Saaxiibadooda Soomaaliya ay 18- Bishaan duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen degmada Awdheegle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntaas uu ku dilay Saddex Xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab,hayeeshee ay soo gaartay in dad rayid ah ay wax kasoo gaareen, balse ay dib u eegis ku sameyn doonaan.
Sidoo kale Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu sii wado doono howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ilaa mas’uuliyada Amniga dalka lagu wareejiyo Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Mareykanka ayaa sanadkaan 2019 waxa uu kordhiyey weerarada dhinaca cirka ah uu ka fuliyo Soomaaliya, waxaana todobaadyadii la soo dhaafay dueyntii ugu badneyd ee Sanadkaan uu Mareykanka ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
Madaxii Maxkamada Al Shabaab ee Bariire oo la qabtay (AKHRISO)
Goormee la qabanaa doorashada Madaxtinimo ee GALMUDUG?